गगन थापाले भने- मलाई पानी दिने दाइ-दिदीलाई धन्यवाद
शोभा शर्मा काठमाडौं, जेठ २१ print
स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यकक्षमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीहरु सञ्चमाया तामाङ र भिमलाल महर्जन। तस्बिर: शोभा शर्मा/सेतोपाटी
स्वास्थ्यमन्त्रीको भव्य कार्यकक्षसँगै जोडिएको सानो कोठा छ। मन्त्रीले आफ्नो टेबुलमा एउटा स्विच थिच्नु मात्र पर्छ, त्यो कोठामा चिया-पानी तयार हुन्छ र मन्त्रीको टेबुलसम्म आइपुग्छ।
मन्त्रीको आदेश भुइँमा झर्न नपाउँदै चिया-पानी तयार पार्न दुई जना कर्मचारी अनवरत खटिन्छन् - सञ्चमाया तामाङ र भिमलाल महर्जन।
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले आइतबार आफ्नो विदाइ पत्रकार सम्मेलनमा सबैलाई धन्यवाद दिँदा यी दुईलाई पनि छुटाएनन्। भने, ‘मलाई भन्नेबित्तिकै पानी ल्याइदिने, चिया खुवाउने दाइ-दिदीदेखि मन्त्रालय टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सबभन्दा तल्लो ओहोदाका यी कार्यालय सहयोगीहरु हुन त दिनरात काममा खटिएका हुन्छन्, तर मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारीभित्र उनीहरुको काम त्यसै हराइरहेको हुन्छ। यहाँसम्म कि, जुन मन्त्रीको सेवामा उनीहरु जुटेका हुन्छन्, तिनै मन्त्रीलाई पनि सम्भवत: उनीहरुको नाउँ थाहा हुँदैन।
त्यसैले त, मन्त्री थापाले विदाइ समारोहमा उनीहरूलाई सम्झे भनेर सुनाउँदा सञ्चमाया लाजले भुतुक्कै भइन्।
‘ए, त्यसो भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले,’ सेतो बत्तीले मात्र उज्यालो भएको कोठामा सञ्चमाया हाँस्दा झन् उज्यालो भयो। उनले आफ्ना सहकर्मी भिमलालतिर हेरिन्। उनको अनुहार लाजले रातो-रातो भइरहेको थियो। दुवै यति खुसी थिए, उनीहरु केही बेरसम्मै एकअर्कालाई हेरेर मुसुमुसु हाँसिरहे।
सञ्चमायाले यो मन्त्रालयमा काम गर्न थालेको २० वर्ष पुगेछ। यसबीच २० थरीका मन्त्री आए होलान्, उनलाई राम्ररी हेक्का पनि छैन। यसरी सार्वजनिक कार्यक्रममै कुनै मन्त्रीले धन्यवाद दिएको भने उनले अहिलेसम्म अनुभव गरेकी थिइन।
‘ए! सबैका अगाडि मन्त्रीज्यूले धन्यवाद भन्नुभो हामीलाई? हामी त उता कार्यक्रममा पनि गएनौं, यहीँ बस्यौं, थाहै भएन हेर्नुस् न,’ उनले एकै सासमा भनिन्।
भिमलाल त झन् सञ्चमायाभन्दा पुराना रहेछन्। उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम थालेकै ३७ वर्ष भएछ। त्यसमा पनि मन्त्रीको कार्यकक्षमै १६ वर्ष बिताइसकेछन्।
हुन त यसबीच थापासँग नमस्ते आदानप्रदानबाहेक उनीहरुको दोहोरो कुराकानी भएको होइन। पानी ल्याइदिने र रित्तो गिलास उठाउने मात्र। आइतबार भने एउटा फरक घटना भएछ।
भिमलाल बिहानै पानीको गिलास लिएर मन्त्री थापाको कोठामा गएका थिए। थापाले उनलाई नियालेर हेरेछन्। त्यसअिघ सधैं काममा घोत्लिरहने थापाले आफूलाई त्यस्तरी चासो दिएर हेरेकोमा खुसी लागेको उनले बताए।
'मैले उहाँलाई कहिल्यै फुर्सदमा देखिनँ। धेरैजसो त एक्लै हुनुहुन्नथ्यो। एक्लै भए पनि कि फोनमा नभए कागजपत्रमा अल्झिएर बस्नुहुन्थ्यो,' उनले भने, 'मैले पानी लगिदिँदा उहाँ धेरैजसो मुसुक्क हाँस्नुहुन्थ्यो, नभए कहिले त हाँस्न पनि बिर्सिनुहुन्थ्यो।'
आइतबार भने एकाएक मन्त्रीले नियालेर हेरेपछि भिमलाल खुसीले कुद्दै गएर सञ्चमायालाई सुनाएछन्। मन्त्रीले त्यसरी हेर्नुको कारण के होला भनेर सञ्चमाया र भिमलालबीच कुराकानी पनि भएछ। उनीहरु मन्त्रीले आफूलाई केही न केही त भन्लान् भनी आस गरेर बसेका रहेछन्।
उनीहरुले जे सोचेका थिए, त्यसको दोब्बर भयो।
‘भिमलाल दाइले त्यसोभन्दा मन्त्रीज्यूले हामीलाई केही भन्न खोज्नुभएको हो कि भन्ने लाग्या थियो,’ सञ्चमायाले भनिन्, ‘उहाँले त पत्रकार सम्मेलनमै सार्वजनिक रुपले हामीलाई धन्यवाद दिनुभएछ। हामीजस्तो सानो तहको कर्मचारीलाई योभन्दा अरु के चाहियो!'
आफूले दिनभरी चिया-पानी दिने मन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा धन्यवाद दिनुलाई सञ्चमायाले आफ्नो कामको सराहनाका रुपमा बुझेकी छन्। 'मन्त्रीज्यूले हामीलाई धन्यवाद दिनुले हामी पनि केही रहेछौं है भन्ने लागेको छ,' उनले भनिन्, ‘उहाँले धन्यवाद मात्र दिँदा पनि हामीलाई लाख भएको छ।’
सञ्चमाया र भिमलाललाई मन्त्री थापा मात्र होइन, उनकी पत्नी अञ्जना पनि राम्रो मान्छे हो भन्ने परेको छ।
केही समयअघि थापापत्नी अञ्जना र दुई छोरी मन्त्रालय आएको सञ्चमायाले सम्झिइन्।
‘मन्त्राणीज्यू त हामीसँग कस्तो मज्जाले बोल्नुभयो। के छ, सञ्चै हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो,’ सञ्चमायाले भनिन्, ‘दुईवटी छोरीहरु रैछन् है। बाबालाई देखेर दौडिँदै गए।’
थापाले दुई छोरीलाई जसै आफ्नो अंगालोमा बेरेर माया गरे, सञ्चमाया त्यो दृश्य हेरेको हेर्यै भइन्। ‘कहिल्यै नबोल्ने मन्त्रीज्यू त मायालु हुनुहुँदो रैछ। मलाई त्यो दिनदेखि उहाँ धेरै असल र राम्रो मान्छे हो भन्ने लाग्यो, श्रीमती झन् असल!’ उनले सहमति खोजेझैँ भिमलालतिर हेरिन्।
भिमलालले सही थापिदिए।
स्वास्थ्य मन्त्रीको कार्यकक्षका यी दुई कार्यालय सहयोगीहरुलाई थापाभन्दा अगाडि उमाकान्त चौधरी र अमिक शेरचन खुब मन पर्दा रहेछन्।
‘उमाकान्त चौधरीज्यूले त अझै पनि मलाई बेलाबेला फोन गर्नु हुन्छ र सञ्चो-बिसञ्चो सोध्नुहुन्छ,’ भिमलालले भने, ‘यहाँ छँदा पनि हामीलाई गोप्यमा बोलाएर के छ, कसो छ भनेर सोध्नु हुन्थ्यो, निकै ख्याल गर्नु हुन्थ्यो। यो बैनी (सञ्चमाया) लाई त अमिक शेरचनज्यू आफ्नो दाइजस्तै लाग्छ।’
उनका अनुसार अमिक शेरचन निकै माया गर्ने स्वभावका थिए। केही परे भन है भनिरहन्थे। सञ्चो-बिसञ्चो र घरबारका कुरा पनि सोधिरहन्थे। एकदिन अफिसमा गलैंचा फेर्ने बेला भएछ। गोप्य बैठक गर्ने कोठाको राम्रो गलैंचा शेरचनले सञ्चमायालाई दिनू भनेछन्।
‘यस्तो राम्रो कार्पेट महङ्गो पर्छ क्या, तिमीले किन्न सक्दैनौ, यहीँबाट लैजाउ,’ अमिकले भनेछन्।
त्यो बेला सञ्चमायालाई घरमा गाह्रो थियो। आफ्नो घरको सुखदु:खसमेत ख्याल गरिदिने मन्त्री देखेर उनी विभोरै भइछन्।
‘हामीलाई राम्रो गरे राम्रो लाग्ने हो नि,’ उनले भनिन्, ‘उमाकान्त मन्त्रीज्यू पनि राम्रै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन नआए नि सोध्ने। म एकपटक ज्यान फुल्ने रोगले एकदिन विराइ अफिस आउँथेँ। पछि उहाँले गंगालालमा फोन गरेर उपचार गरिदिन भन्दिनुभयो। मैले होल बडी नि:शुल्क उपचार गराएँ।’
आफ्ना छोराछोरीलाई जागिर लगाउने बेला उनीहरुलाई मन्त्रीले केही सहयोग गरिदिऊन् भन्ने चाहना हुँदो रहेछ। थापासँग पनि उनीहरुलाई यही आस रहेछ। भिमलालकी बुहारी नर्स छिन्। थापाले भनिदिए बुहारीको जागिर पक्का हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको रहेछ। कुरा पनि गरेछन्, तर थापाले आफ्ना निजी सचिवहरुलाई देखाइदिएछन्।
सञ्चमायाले पनि प्रसूति गृहमा काम गर्ने आफ्नी छोरीको जागिर पक्का गर्न चाहेकी रहिछन्। तर, थापालाई भन्ने आँटै नआएको उनी बताउँछिन्।
काभ्रेकी सञ्चमाया कलंकी बस्छिन्। उनका तीनवटी छोरी छन्। भिमलाल भने पाटनका स्थायी बासिन्दा हुन्। उनका तीन छोरा, तीन बुहारी छन्।
‘ठूला मान्छेले सोधे आफ्ना दु:खसुख भन्ने मन हुन्छ नि हाम्रो पनि,’ सञ्चमायाले भनिन्, ‘हामी साना मान्छेसँग कुरा गर्ने फुर्सद उहाँहरुलाई हुन्न।’
‘अिहलेसम्म दोहोरो कुराकानी भएन, तर जाने बेला कम्तीमा सबैका अगाडि सम्झिनुभयो, खुसी लाग्यो,' भिमलालले भने।
त्यसो त नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुन बाँकी नै छ। थापा अझै एकदुई दिन मन्त्रालय जाने छन्।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ २१, २०७४ १७:०७:४९